ခင်မောင်ထွေး (ပျဉ်းမနား)| February 15, 2013 | Hits:37,286
| | ဒီနှစ် နေပြည်တော် ဆီးဂိမ်းမှာ ကျွမ်းဘား မပါတော့ (ဓာတ်ပုံ – Reuters)
Win Myint February 15, 2013 - 3:46 pm ပြောချင်တာကတော့ မထင်။
Reply MHK February 15, 2013 - 3:58 pm သေ ချာ တယ် ရုပ် ပျက် ဆင်း ပျက် ဖြစ် အုးံ မှာ…
Reply lwinthant February 19, 2013 - 10:33 pm ha ha you r right, still cheating the people. But all people know about that.If not they can not put the money in their pocket.Because they are shameless. Forgive them. Even look at the most successful soccer of Myanmar history.
Reply ml February 16, 2013 - 3:48 am ဆရာရေ … ကိုယ့်အထုပ် ကိုယ်ဖြည်ပြီး ကိုယ့်ဘာသာ အရှက်ခွဲမယ့် ပွဲ ဖြစ်တော့မယ် ထင်ပါရဲ့။ ကိုယ့်ရေကွက် သေးသေးလေးကို ပင်လယ်ပြင်ထင်နေတဲ့ နေပြည်တော်သားများ ဦးဆောင်နေတာဆိုတော့ အရှက်တော့ လှလှကြီး ကွဲတော့မှာ မြင်ယောင်သေးရဲ့။ တင်းနစ်ကို ဖြုတ်ရမှာပေါ့။ ပွဲလုပ်ပေးလောက်အောင် တင်းနစ်ကွင်း ကောင်းကောင်း အလုံအလောက်မှ မရှိတာ။ ဂျွမ်းဘားကလဲ ပစ္စည်းမစုံ၊ အရည်အသွေး မမီဘူး ထင်ပါရဲ့။
Reply အပြင်လူ February 16, 2013 - 7:03 pm မြန်မြန်လုပ်ကြပါဗျို့၊ ထုပ်ဆီးထိုး ဖန်ခုန်နဲ့ ခြေတစ်ပေါင်ကျိုး လိုက်တန်းပြေးတန်းတွေ ထည့်ပေးဖို့ အမြန်ဆုံး အကြံပေးကြပါဗျာ ။ မြန်မာ့အားကစား မလွှမ်းနိုင်ရင်တောင် အလိမ်အညာလေး လွှမ်းနိုင်ရင်လည်း မဆိုးလှပါဘူး Reply Sunshine February 18, 2013 - 2:34 pm I will be flying to Nay Pyi Taw to witness and watch the game to see how Laotian Team beats Burmese Team in soccer tournament.
Reply K Z Y Htun February 19, 2013 - 7:21 pm Very good joke.